छथरमा बसाइँ सर्नेलाई इनाम ! «
छथरमा बसाइँ सर्नेलाई इनाम !
तेह्रथुम-तेह्रथुमको छथर गाउँपालिकाले बसाइँ सरेर आउने नागरिकलाई १ लाख रुपैयाँ इनाम दिने नीति लिएको छ । त्यतिमात्र नभइ गाउँपालिकाले उनीहरूलाई व्यावसायिक काम गरेमा ५ लाख रुपैयाँ अनुदान पनि दिने घोषणा गरेको छ ।
नेपालमै पहिलोपटक यस गाउँपालिकामा बसाइँ सरी आउने नागरिकलाई व्यावसायिक अनुदान दिने कार्यक्रम तयार भएको अधिकारीहरूले जनाएका छन् । नागरिकलाई व्यावसायिक तथा गाउँपालिकामा रहेको नागरिकलाई आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाउनका निम्ति अनुदानको कार्यक्रम सुरु गरिएको गाउँपालिका प्रमुख सन्तवीर लिम्बुले बताए ।
गाउँपालिका बाहिर अन्यत्रबाट बसाइँ सरी आउने नागरिकले व्यावसायिक योजनाको आधारमा गाउँपालिकाले १ लाख इनाम र ५ लाख व्यावसायिक अनुदान दिने भएको प्रमुख लिम्बुले बताए । आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको यो कार्यक्रम गाउँपालिकाले हालै तेस्रो गाउँसभामार्फत सार्वजानिक गरेको हो । कार्यक्रमका लागि तत्काल १० लाखको कोष तयारी भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । बसाइँ सरी आउनेको संख्याको आधारमा अन्तरिक कोषबाट थप रकम तयारी गरिने उनको भनाइ छ । अनुदान प्राप्त गर्नका निम्ति बसाइँ सरी आउने नागरिकले बसाइँसराइको कागजातका साथै व्यावसायिक योजना गाउँपालिकामा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सोही कागजात र व्यावसायिक योजनाको आधारमा न्यूनमत १ लाखदेखि अधिकतम् ५ लाख रुपैयाँसम्म व्यावसायिक अनुदान दिइने प्रमुख लिम्बुले बताए ।
आगामी ५ वर्षभित्रमा गाउँपालिकाले जनसंख्या २५ हजारमाथि पु-याउने लक्ष्यसहित यस्तो कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । बसाइँ सरी आउने नागरिकलाई यसै आर्थिक वर्षदेेिख लागू हुनेगरी अनुदान दिइने गाउँपालिकाका प्रवक्ता राजन नेपालीले बताए । गाउँपालिकाभित्र रही कृषि तथा पशु उद्योग क्षेत्रमा गत वर्षदेखि नै सञ्चालन गरिएको आधारमा अनुदानको कार्यक्रम सुरु गर्दै आएको प्रवक्ता नेपालीले बताए । जिल्लाको पश्चिमी क्षेत्रमा छथर गाउँपालिकाका युवाहरूलाई व्यावसायिक बनाउनका साथै रोजगार सिर्जना गर्ने ध्येयले अनुदानको कार्यक्रम अगाडि सारिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
गाउँपालिकामा रहेको मुख्य समस्यालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै बसाइँसराईलाई न्यूनीकरण गर्न यस कार्यक्रमले मदत पुग्ने भएको छ । बर्सेनि बसाइँसर्दै अन्यत्र जाने यहाँका नागरिकहरूलाई अबको २० वर्षमा आफै फर्किएर आउने बनाउनका निम्ति विभिन्न दीर्घकालीन योजनाहरू निर्माण भइरहेको गाउँपालिका कार्यालयले जनाएको छ । सुक्खाग्रस्त क्षेत्रका नागरिकहरूको लागि खानेपानी समस्यलाई समाधानका निम्ति छथर गाउँपालिकाले पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै आाएको छ । यहाँका स्थानीयको मुख्य समस्या नै सडक र खानेपानी रहेकोले बसाइँ सर्न तयार भएका परिवारलाई केही समय धैर्य गर्न गाउँपालिकाले अनुरोध गर्दै आएको छ । विभिन्न प्रविधिको माध्यमबाट छथरका जनताको समस्यालाई हल गर्न गाउँपालिका अहोरात्र चिन्तित बन्दै आएको उपाध्यक्ष तारा ढकालले बताइन् ।
रोजगारका निम्ति भौतरिइरहेका युवालाई व्यावसायिकतातर्फ उन्मुख गराउँदै आत्मनिर्भर बनाउन यो कार्यक्रमले टेवा पुग्ने भएको छ । पछिल्लो समय यहाँका युवा विभिन्न व्यवसायमा तल्लीन हुँदै आएका छन् । वैदेशिक रोजगाारबाट फर्किएका युवा फर्म नै दर्ता गरी गाईपालन तथा कुखुरापालन गर्दै आएका छन् ।
गाउँपालिकाले छथरलाई नमुना तथा समृद्ध बनाउका निम्ति विभिन्न पकेट क्षेत्रको रूपमा विकास गरेको छ । तरकारी, दूध, पशुपालन, मकै, बंगुरपालन, फलफूललागयतका पकेट कार्यक्रमलाई गाउँपालिकाले अघि सारेको छ । गतवर्ष गाउँपालिकाले कृषि, पशु तथा उद्योगीहरूलाई अनुदानको कार्यक्रमका साथै विभिन्न सीपमूलक तालिम प्रदान गरेको थियो । तत्कालिन सुदाप, ओख्रे ,फाक्चारमा पञ्चकन्या, हमरजुङ र आङदिम गाविस मिलेर बनेको गाउँपालिका जिल्लाकै नमुना गाउँपालिकाको रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यका रहेको प्रमुख लिम्बुले बताए । गाउँपालिकामा १६ हजार ७ सय ५० जनसंख्या रहेको छ ।